Qalbi Dhagax: Doorasho xor iyo xalaal ah baa maanta ka dhacday Kismaayo, laaluush la qaatayna ma jirin”! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Qalbi Dhagax: Doorasho xor iyo xalaal ah baa maanta ka dhacday Kismaayo,...
Qalbi Dhagax: Doorasho xor iyo xalaal ah baa maanta ka dhacday Kismaayo, laaluush la qaatayna ma jirin”!
Kismaayo (Halqaran.com) – Cabdi-kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) ayaa ammaan kala duldhacay doorashadii Guddoonka Baarlamaanka Jubbaland, ee maanta ka dhacday Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ayaa Sabtidii maanta doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka, Gudoomiye Kuxigeenka 1-aad iyo Gudoomiye Kuxigeenka 2-aad.
Saddexda xubnood ee maanta lagu doortay Magaalada Kismaayo ayaa waxay yihiin Guddoonkii hore ee Baarlamaanka Jubbaland, iyadoona saddexduba dib loo soo doortay.
Cabdi-kariin Qalbi Dhagax oo goobjoog ka ahaa doorashadii maanta ayaa sheegay in musharaxiinta la doortay aanay dhiibin wax laaluush ah.
”Musharaxiinta waxaa la doortay iyagoo aan dhiibin wax laaluush ah.” buu yiri Cabdi-kariin Sheekh Muuse oo ka mid ah martida lagu soo casuumay Doorashooyinka maamulka Jubbaland.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay in goobjoog uu u ahaado doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda Xarunta KMG ee Maamulka Jubbaland.
”Aad baan ugu faraxsnahay inaan goobjoog ka ahay doorasho qurux badan oo xor iyo xalaal ah.” ayuu yiri Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa Masuuliyiintii Jabhadda ONLF.
Doorasho xor iyo xalaal ah